Boca Juniors iyo River Plate Oo Gaashaanka Ku Dhuftay In Ciyaarta Finalka Copa Libertadores Lagu Qabto Garoonka Real Madrid Ee Santiago Bernabeu Iyo Hadal Maradona Sheegay Oo Hiil U Noqday Boca – Cadalool.com
Boca Juniors iyo River Plate Oo Gaashaanka Ku Dhuftay In Ciyaarta Finalka Copa Libertadores Lagu Qabto Garoonka Real Madrid Ee Santiago Bernabeu Iyo Hadal Maradona Sheegay Oo Hiil U Noqday Boca
November 30, 2018 Abdiwahab A. Abeye
Kooxaha Boca Juniors iyo River Plate ayaa kasoo horjeedsaday go’aanka uu xidhiidhka kubadda cagta Latin America ee CONMEBOL uu ku gaadhay in lugta labaad ee finalka Copa Libertadores ee labadan kooxood lagu qabto garoonka Real Madrid ee Santiago Bernabeu, kaddib markii ay dhibaatooyin ka dhaceen ciyaar lagu qaban lahaa garoonka River oo laba jeer ay dib u dhacday.
CONMEBOL ayaa go’aan ay shalay soo saartay waxay ku sheegtay in ciyaarta finalka ee dhiman loo rarayo magaalada Madrid, hase yeeshee kooxda dhibaatada tirsanaysa ee Boca Juniors oo ciyaartoygeeda weerar lagu qaaday Sabtidii, dhaawacyana la gaadhsiiyey ayaa rafcaan u gudbisay maxkamadda Garsoorka ciyaaraha, taas oo ay ku doonayaan in gebi ahaanba meesha laga saaro ciyaartan oo koobka la guddoonsiiyo iyagoon ciyaarin.
Madaxweynaha kooxda Boca Juniors oo lagu magacaabo Daniel Angelici ayaa warbaahinta u sheegay in kooxdiisu ay maxkamadda CAS u gudbisay dacwad ay ka qabto go’aanka CONMEBOL, oo aan ku fadhiyin sharciga xidhiidhka kubadda cagta qaaraddaas oo qodobkiisa 8-aad sheegayo in kooxda la dhibaateeyo la siiyo koobka, isla markaana la ganaaxo kuwa dhibta geystay.
Arrintan Boca Juniors ku doodayso oo horraantii toddobaadka uu bedka keenay halyeygii reer Argentine ee Diego Maradona, ayaa waxa go’aankeeda gaadhi doonta maxkamadda CAS.
Dhinaca kale, kooxda garoonkeeda lagu ciyaari lahaa ee River Plate ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay sharciga la tegayso CONMEBOL oo ay ka dacwoonayso laba ganaax oo kala ah in garoonkeeda aanay ka dhicin ciyaartan oo la geeyo Santiago Bernabeu iyo inay bixiyaan lacag dhan $400,000.
Si kastaba ha ahaatee, Xidhiidhka CONMEBOL ayaa waxa uu Khamiistii shaaciyey finalka Copa Libertadores lugtiisa labaad ay 9 December ka dhici doonto garoonka Sanatiago Bernabeu ee magaalada Madrid.